Owusoɛr No Ma Yehu Dɛ Jehovah Wɔ Ɔdɔ, Nyansa Nye Abotar | Ɔweɔn-Aban Adzesua
Ɔweɔn-Aban—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu | August 2020
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Congo Mmum Kasa Costa Rica Mmum Kasa Croatia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Efik El Salvador Mmum Kasa English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greek Mmum Kasa Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemala Mmum Kasa Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hungarian Hungary Mmum Kasa Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kenya Mmum Kasa Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Mmum Kasa Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Mmum Kasa Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Min Nan (Taiwan) Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambique Mmum Kasa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaragua Mmum Kasa Nigeria Mmum Kasa Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zambia Mmum Kasa Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
ADZESUA ASƐM 33
Owusoɛr No Ma Yehu Dɛ Jehovah Wɔ Ɔdɔ, Nyansa Nye Abotar
“Owusoɛr bi bɛba.”​—ANDW. 24:15.
NDWOM 151 Ɔbɛfrɛ
1. Ebɛnadze ntsi na Jehovah bɔɔ nkwa?
MBER bi a etwa mu no nna Jehovah nanko na ɔwɔ hɔ, naaso nna ɔnntse nka dɛ ɔayɛ ankonam. Nna biribiara nnyi hɔ a ohia Nyankopɔn, naaso nna ɔwɔ ɔpɛ dɛ abɔdze afofor bɛtsena ase na woeenya enyigye. Ɔdɔ kaa Jehovah ma ɔhyɛɛ ase dɛ ɔrobɔ adze.​—Ndw. 36:9; 1 John 4:19.
2. Ebɛnadze na Jesus na abɔfo no yɛe wɔ ndzɛmba a Jehovah bɔe no ho?
2 Odzi kan, Jehovah bɔɔ ne Ba Jesus. Afei, ɔnam ne Ba no do ‘bɔɔ ndzɛmba a aka nyina.’ Dɛ nhwɛdo no, ɔnam ne Ba no do bɔɔ abɔfo a hɔn dodow yɛ ɔpepem pii no. (Col. 1:16) Jesus n’enyi gyee dɛ onyaa ho kwan nye n’Egya bɔɔ mu yɛɛ edwuma. (Mbɛ. 8:30) Dɛmara na abɔfo no so hɔn enyi gyee. Aber a Jehovah nye no Dwimfopanyin, Jesus, bɔɔ ɔsor na asaase no, abɔfo no hunii. Ebɛnadze na abɔfo no yɛe? ‘Wɔbɔɔ ose’ ber a Nyankopɔn bɔɔ asaase no, na ekyingye biara nnyi ho dɛ wɔkɔr do yii no ayɛw ber a wohun ndzɛmba afofor a ɔbɔe no, nkanka nyimpa. (Job 38:7; Mbɛ. 8:31) Dɛm abɔdze yi mu biara ma yehu Jehovah no dɔ nye ne nyansaa.​—Ndw. 104:24; Rom. 1:20.
3. Dɛ mbrɛ 1 Corinthfo 15:21, 22 kyerɛ no, ebɛnadze na Jesus no werdam afɔrbɔ no bɛma Adam nye Eve hɔn asefo enya?
3 Nna Jehovah pɛ dɛ nyimpa tsena ase daa wɔ asaase fɛɛfɛw a ɔabɔ no do. Naaso Adam na Eve tseew etũa tsiaa hɔn Egya a ɔwɔ ɔdɔ no. Dɛm ntsi, nna wonnkotum atsena ase daa. Dɛ mbrɛ ɔtse biara no nna wɔnye hɔn asefo bowuwu. (Rom. 5:12) Ebɛnadze na Jehovah yɛe wɔ ho? Ntsɛmara na ɔyɛɛ nhyehyɛɛ a ɔdze bɛgye adasamba. (Gen. 3:15) Nna Jehovah dze ne Ba Jesus bɛma dɛ werdam dze agye Adam na Eve hɔn mba efi bɔn na owu mu. Nna Jehovah nam iyi do bɛma obiara a obefi ne pɛ mu asom no no enya onnyiewiei nkwa.​—John 3:16; Rom. 6:23; kenkan 1 Corinthfo 15:21, 22.
4. Ebɛn nsɛmbisa na yebosusu ho wɔ adzesua yi mu?
4 Anohoba a Nyankopɔn abɔ dɛ obenyan ewufo no, yɛwɔ nsɛm pii a yebotum ebisa afa ho. Dɛ nhwɛdo no, wobesi dɛn enyan ewufo? Sɛ wonyan hɛn adɔfo fi owu mu a, ana yebotum ehu dɛ ɔyɛ hɔnankasa? Ebɛn akwan do na owusoɛr no botum ama hɛn enyi aagye? Sɛ yɛdwendwen owusoɛr no ho a, ebɛn kwan do na obotum ama yeenya enyisɔ kɛse ama Jehovah no dɔ, ne nyansaa nye n’abotar? Ma yensusu dɛm nsɛmbisa yi mu biara ho.
5. Ebɛnadze ntsi na yebotum ahwɛ kwan dɛ wonnkenyan nyimpa nyinara abɔ mu wɔ ber kor mu?
5 Sɛ Jehovah nam ne Ba no do nyan nyimpa ɔpepem pii fi owu mu a, yebotum ahwɛ kwan dɛ nnyɛ hɔn nyinara na wobenyan hɔn ber kor mu. Ebɛnadze ntsi a? Osiandɛ, sɛ ɔkɛba dɛ mpofirmu ara nyimpa abɔ apee do wɔ asaase do a, obotum ama asaase do ayɛ begyabegya. Naaso yenyim dɛ Jehovah yɛ ne biribiara esiado esiado. Onyim dɛ ɔwɔ dɛ ɔtoto ndzɛmba pɛpɛɛpɛr ama nkorɔfo eetum atsena asomdwee mu. (1 Cor. 14:33) Jehovah Nyankopɔn daa nyansa na abotar edzi ber a ɔnye Jesus bɔɔ mu siesiee asaase no ama nyimpa aatsena do no. Mfrenhyia Apem Tumdzi no ase no, Jesus so bɛda su a ɔtse dɛm edzi ber a ɔnye hɔn a woetwa Har-Magedon bɔbɔ mu esiesie asaase no ama hɔn a wobenyan hɔn efi owu mu no.
Hɔn a wobenya nkwa wɔ Har-Magedon no bɛkyerɛkyerɛ hɔn a wobenyan hɔn efi owu mu no Nyankopɔn n’Ahendzi no nye Jehovah n’apɛdze ho adze (Hwɛ nkyekyɛmu 6) *
6. Dɛ mbrɛ Asomafo Ndwuma 24:15 kyerɛ no, hɔn a Jehovah benyan hɔn no, hɔn mu bi nye woananom?
6 Dza ɔsen ne nyinara no, hɔn a wobotwa Har-Magedon no bɛkyerɛkyerɛ hɔn a wobenyan hɔn efi owu mu no Nyankopɔn n’Ahendzi nye Jehovah n’apɛdze ho adze. Ebɛnadze ntsi a? Osiandɛ, nyimpa dodow no ara a wobenyan hɔn no bɛyɛ “hɔn a wɔnntsen.” (Kenkan Asomafo Ndwuma 24:15.) Dɛm ntsi, ɔsɛ dɛ wɔyɛ nsesa pii wɔ hɔn asetsena mu mbrɛ ɔbɛyɛ a wobotum enya Christ no werdam no do mfaso ma woeetum atsena ase daa. Ɔwodze hwɛ edwuma kɛse ara a ɔbɛyɛ dɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ nyimpa ɔpepem pii a wonnyi Jehovah noho nyimdzee biara no ma woeehu Nyankopɔn ho nokwasɛm. Ana hɔn mu biara benya ne Bible kyerɛkyerɛfo dɛ mbrɛ ndɛ yɛnye nkorɔfo sũa Bible no? Ana wɔdze hɔn bɔkɔ asafo ahorow mu, na wɔaatsetse hɔn ma hɔn so eetum akyerɛkyerɛ hɔn a wobenyan hɔn ekyir no? Yerunntum nnkyerɛ, ntsi ɔwɔ dɛ yesie abotar na yɛtweɔn kesi dɛm aber no. Naaso, yenyim dɛ onkodu Christ ne Mfrenhyia Apem Tumdzi no n’ewiei dze, ‘Jehovah ho nyimdzee bɛhyɛ asaase mã.’ (Isa. 11:9) Nokwasɛm nye dɛ, yebenya edwuma a enyigye pii wɔ mu ayɛ wɔ mfrenhyia apem no mu!
7. Sɛ Nyankopɔn no nkorɔfo roboa hɔn a woenyan hɔn no a, ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ wonya tsema ma hɔn?
7 Wɔ Christ ne Mfrenhyia Apem Tumdzi no ase no, no ho behia dɛ Jehovah ne mba a wɔwɔ asaase do nyina no bɛyɛ nsesa wɔ hɔn asetsena mu mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɔsɔ n’enyi. Ntsi, ber a wɔroboa hɔn a woenyan hɔn efi owu mu ma woeedzi nsusui nye akɔndɔ bɔn do na wɔdze Jehovah ne gyinapɛn ayɛ edwuma no, ɔsɛ dɛ wɔda tsema edzi. (1 Pet. 3:8) Ekyingye biara nnyi ho dɛ, hɔn a woenyan hɔn efi owu mu no bohu dɛ Jehovah no nkorɔfo brɛ hɔnho adze, na ‘wɔreyɛ hɔnankasa hɔn nkwagye ho edwuma.’​—Phil. 2:12.
SƐ WONYAN HƐN ADƆFO FI OWU MU A, ANA YEBOTUM EHU DƐ ƆYƐ HƆNANKASA?
8. Ebɛnadze ntsi na yebotum ahwɛ kwan dɛ, hɛn adɔfo a wobenyan hɔn efi owu mu no, yebohu dɛ ɔyɛ hɔnankasa?
8 Hɔn a woenyan hɔn efi owu mu no, hɔn adɔfo a wɔbɛba ebehyia hɔn no bohu dɛ ɔyɛ hɔnankasa. Yɛwɔ siantsir ahorow ntsi a yebotum akã dɛm. Dɛ nhwɛdo no, osian mber bi a woetwa mu no ɔkwan a Jehovah faa do nyaan nkorɔfo ntsi, yebotum ahwɛ kwan dɛ hɔn a obenyan hɔn no, ɔbɛma wɔayɛ tse dɛ mbrɛ nna wɔtse ana woruwu no. Dɛ mbrɛ nna wosi kasa, wɔdwen adze ho, na wɔyɛ hɔn adze no rennsesa. Kaa dɛ Jesus dze owu totoo nda ho, nna ɔdze owusoɛr totoo mbrɛ wosi nyan obi fi nda mu ho. (Matt. 9:18, 24; John 11:11-13) Sɛ obi da na ɔsoɛr a, dɛ mbrɛ nna ɔtse, ɔkasa, nye ne tsirmu nsɛm nnsesa. Ɔtse dɛ mbrɛ nna ɔtse ana ɔrekɛda no. Ma yɛmfa Lazarus dɛ nhwɛdo. Nna oewu ndaanan, ntsi nna ne nyimpadua ahyɛ ase resɛɛ. Naaso, aber a Jesus nyaan no fii owu mu no, ntsɛmara na ne nkyerɛbaa no hun dɛ ɔyɛ noara. Ekyingye biara nnyi ho dɛ, nna Lazarus so kaa hɔn.​—John 11:38-44; 12:1, 2.
9. Hɔn a wobenyan hɔn efi owu mu no, wɔremmfa nyimpadua nye adwen a odzi mũ mmba, ebɛnadze ntsi a?
9 Jehovah bɔ anohoba dɛ hɔn a wɔbɛtsena ase wɔ Christ no tumdzi ase no, hɔn mu biara nnkɛse dɛ: “Meyar.” (Isa. 33:24; Rom. 6:7) Ntsi, hɔn a wobenyan hɔn efi owu mu no, wɔbɛma hɔn nyimpadua a odzi mũ. Naaso, nnyɛ amonmu hɔ ara na wɔbɛyɛ nyimpa a wodzi mũ. Annyɛ dɛm a, hɔn adɔfo runnhu dɛ ɔyɛ hɔnankasa. Ɔda edzi dɛ Christ ne Mfrenhyia Apem Tumdzi no mu no, nkakrankakra adasamba nyinara bɛyɛ nyimpa a wodzi mũ. Jesus bɛsan dze Ahendzi no ama n’Egya wɔ mfrenhyia apem n’ewiei. Dɛm aber no, nna Ahendzi no ewie n’edwuma nyinara yɛ korakora. Edwuma no bi nye adasamba a ɔbɛma wɔayɛ nyimpa a wodzi mũ.​—1 Cor. 15:24-28; Nyi. 20:1-3.
EBƐN AKWAN DO NA OWUSOƐR NO BOTUM AMA HƐN ENYI AAGYE?
10. Owusoɛr no bɛma atse nka dɛn?
10 Twa ber a erema w’adɔfo akɔaba no ho mfonyin hwɛ. Enyigye a ibenya no, ana ɔbɛma aserew anaa esu? Ana w’enyi bɛgye araa ma aatow ayɛyindwom ama Jehovah? Yɛgye dzi papaapa dɛ ibenya ɔdɔ kɛse ama w’Egya a ɔdwen woho nye ne Ba a ɔwɔ ɔdɔ no, osiandɛ hɔn beenu no na wɔama owusoɛr no aba mu.
11. Sɛ yɛhwɛ asɛm a Jesus kãe a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ John 5:28, 29 no a, hɔn a wɔbɛtsena ase dɛ mbrɛ Nyankopɔn ne tsenenee gyinapɛn tse no, ebɛnadze na wobenya?
11 Hɔn a wobenyan hɔn efi owu mu no, wobegyaa hɔn kan abrabɔ no na wɔaatsena ase dɛ mbrɛ Nyankopɔn ne tsenenee gyinapɛn tse. Hwɛ enyigye ara a iyi bɛma woenya! Hɔn a wɔbɛyɛ dɛm nsesa yi, wobenya ho kwan atsena ase afebɔɔ. Naaso, hɔn a wɔbɛtsew etũa etsia Nyankopɔn no, ɔnnkɛma hɔn kwan ma wɔaasɛɛ asomdwee a yebenya wɔ Paradise hɔ no.​—Isa. 65:20; kenkan John 5:28, 29.
12. Ebɛn kwan do na Jehovah behyira nyimpa a wɔwɔ asaase do nyina?
12 Ahendzi no no tumdzi ase no, Nyankopɔn no nkorɔfo nyina bohu dɛ asɛm a ɔwɔ Mbɛbusɛm 10:22 no yɛ nokwar. Hɔ kã dɛ: ‘Jehovah ne nhyira ɔma ahonya, na ɔmmfa awerɛhow nnka ho.’ Jehovah dze no sunsum bɔboa n’asomfo ma wɔaabɛyɛ ahonyafo wɔ sunsum afamu. Wɔbɛba abɛyɛ tse dɛ Christ na wɔaayɛ nyimpa a wodzi mũ. (John 13:15-17; Eph. 4:23, 24) Adzekyee biara, wɔbɛyɛ nyimpa a hɔn apɔwmudzen dzi mũ, na hweeara nnyɛ hɔn. Hwɛ mbrɛ asetsena besi ayɛ enyigye afa! (Job 33:25) Ɔnodze, sɛ yɛdwendwen owusoɛr no ho a, ebɛn kwan do na ɔbɔboa hɛn ndɛ?
KYERƐ JEHOVAH NO DƆ HO ENYISƆ
13. Dɛ mbrɛ Ndwom 139:1-4 kyerɛ no, ebɛn kwan do na owusoɛr no ma yehu dɛ Jehovah nyim hɛn yie?
13 Dɛ mbrɛ yeedzi kan akã ho asɛm no, sɛ Jehovah nyan ewufo a, ɔbɛma wɔasan enya adwen nye nyimpasu a nna wɔwɔ ana woruwu no. Susu dza iyi kyerɛ ho hwɛ. Jehovah dɔ wo araa ma mbrɛ isi dwen, etse nka, ekasa, na eyɛ w’adze no, ɔhyɛ no nsew na ɔkaa. Ntsi, sɛ ɔpɛ dɛ onyan wo fi owu mu a, ɔnnkɛyɛ dzen koraa dɛ ɔbɛsan ama eenya adwen nye nyimpasu a nna ewɔ ana iruwu no. Nna Ɔhen David nyim dɛ Jehovah nyim hɛn mu biara yie. (Kenkan Ndwom 139:1-4.) Sɛ yɛtse mbrɛ Jehovah si nyim hɛn no ase yie a, ebɛn kwan do na obotum aka hɛn ndɛ?
14. Sɛ yɛdwendwen mbrɛ Jehovah si nyim hɛn yie no ho a, ɔsɛ dɛ yɛtse nka dɛn?
14 Sɛ yɛdwendwen mbrɛ Jehovah si nyim hɛn yie no ho a, onnyi dɛ yɛma biribiara haw hɛn. Ebɛnadze ntsi a? Osiandɛ, ɔsɛ dɛ yɛkaa dɛ Jehovah dwen hɛnho papaapa. Obu hɛn mu biara dɛ ɔsom bo. Ɔkaa asɛm biara a esi wɔ hɛn asetsena mu nye mbrɛ esi enya hɛn do nkantando no. Hwɛ mbrɛ iyi si ma yenya awerɛkyekyer! Onnyi dɛ yɛtse nka da dɛ yɛyɛ ankonam. Jehovah wɔ hɛn nkyɛn aber biara, na ɔpɛ dɛ ɔboa hɛn.​—2 Mber. 16:9.
KYERƐ JEHOVAH NE NYANSAA HO ENYISƆ
15. Ebɛn kwan do na owusoɛr no ma yehu dɛ Jehovah wɔ nyansa?
15 Sɛ nkorɔfo suro dɛ wobowu a, hɔn atamfo botum ehunahuna hɔn dɛ woboku hɔn. Wobotum ayɛ dɛm dze ahyɛ hɔn ma wɔaayɛ adze a nkyɛ wɔrennyɛ. Nyimpa a Satan dze hɔn dzi dwuma no, wɔdze owu hunahuna nkorɔfo ma woyi hɔn anyɛnkofo ma anaa wɔhyɛ hɔn ma wogyaa hɔn gyedzi mu. Naaso, worunntum nnhyɛ hɛn ma yɛnnyɛ dɛm. Yenyim dɛ, sɛ hɛn atamfo ku hɛn mpo a, Jehovah benyan hɛn efi owu mu. (Nyi. 2:10) Afei so, yɛgye dzi dɛ worunntum nnyɛ biribiara a ɔbɛtsew hɛn efi Jehovah ho. (Rom. 8:35-39) Owusoɛr ho enyidado a Jehovah ama yeenya no ma yehu dɛ ɔwɔ nyansa papaapa! Osian owusoɛr no ntsi, sɛ Satan n’ekyirtaafo hunahuna hɛn dɛ woboku hɛn mpo a, yɛnnkɛyɛ dza wɔbɛhyɛ hɛn dɛ yɛnyɛ no. Afei so, owusoɛr ho enyidado no ma yenya akokodur kɛse dze dzi Jehovah nokwar.
Anohoba a Jehovah abɔ dɛ ɔdze hɛn honam afamu ehiadze bɛma hɛn no, ana hɛn gyinaesi ahorow da no edzi dɛ yɛgye dzi? (Hwɛ nkyekyɛmu 16) *
16. Ebɛn nsɛm na ɔsɛ dɛ ibisa woho, na ebɛn kwan do na no ho mbuae no botum aboa wo ma eehu gyedzi a ewɔ wɔ Jehovah mu?
16 Sɛ Jehovah n’atamfo dze owu hunahuna wo dɛ woboku wo a, ana ibotum enya gyedzi dɛ Jehovah benyan wo? Ibesi dɛn ehu dɛ ibenya Jehovah no mu gyedzi dɛm aber no? Ɔkwan kor nye dɛ ibebisa woho dɛm asɛm yi, ‘Ana gyinae nketsenketse a misisi da biara no da no edzi dɛ mowɔ Jehovah no mu gyedzi?’ (Luke 16:10) Asɛm fofor so a ibotum ebisa woho nye dɛ, ‘Ana m’asetsena da no edzi dɛ, anohoba a Jehovah abɔ dɛ sɛ medze Ahendzi no dzi kan a, ɔdze m’asetsena mu ehiadze bɛma me no, megye dzi?’ (Matt. 6:31-33) Sɛ iyi dɛm nsɛmbisa yi ano dɛ nyew a, nna ɔkyerɛ dɛ egye Jehovah dzi, na esiesie woho ama nsɔhwɛ biara a ɔbɛba w’akwan mu no.​—Mbɛ. 3:5, 6.
KYERƐ JEHOVAH N’ABOTAR HO ENYISƆ
17. (a) Ebɛn kwan do na owusoɛr no ma yehu dɛ Jehovah wɔ abotar? (b) Yebesi dɛn akyerɛ Jehovah n’abotar ho enyisɔ?
17 Jehovah ahyɛ ber pɔtsee a ɔbɛsɛɛ dɛm wiadze bɔn yi. (Matt. 24:36) Naaso, sɛ dɛm aber no nnsoe a, ɔnnkɛper noho dze ɔsɛɛ no aba. Ɔwɔ mu dɛ ɔwɔ ɔpɛ a no mu yɛ dzen dɛ obenyan ewufo dze, naaso oesie abotar. (Job 14:14, 15) Ɔrotweɔn dɛ ber a ɔahyɛ no bɔso ma oeenyan hɔn aba nkwa mu. (John 5:28) Yɛwɔ siantsir pii ntsi a yebotum akyerɛ Jehovah n’abotar ho enyisɔ. Ɔwodze susu ho hwɛ: Osiandɛ Jehovah wɔ abotar ntsi, nyimpa pii a hɛn so yɛka ho enya ho kwan ‘aba mfehoekyir mu.’ (2 Pet. 3:9) Jehovah pɛ dɛ ho kwan no bue ma nyimpa piinara ma wobenya onnyiewiei nkwa. Dɛm ntsi, hom mma yɛnda no edzi dɛ yɛkyerɛ n’abotar ho enyisɔ. Ebɛn kwan do? Ɔsɛ dɛ yɛyer hɛnho hwehwɛ “hɔn a woeyi hɔn ama onnyiewiei nkwa” anaa hɔn a wɔpɛ onnyiewiei nkwa, na yɛboa hɔn ma wonya Jehovah ho dɔ na wɔsom no. (Andw. 13:48) Dɛm kwan no do no, wobenya Jehovah n’abotar no do mfaso dɛ mbrɛ hɛn so yeenya no.
18. Ebɛnadze ntsi na ɔsɛ dɛ yenya afofor ho abotar?
18 Jehovah dze abotar bɔtweɔn ekesi dɛ mfrenhyia apem no bɛba ewiei ana ɔaahwɛ kwan dɛ yɛbɛyɛ nyimpa a yedzi mũ. Kesi dɛm aber no, Jehovah ayɛ krado dɛ ɔdze hɛn bɔn bɛkyɛ hɛn. Dɛ mbrɛ ɔtse biara no, ɔsɛ dɛ yesũasua Jehovah na yɛdze hɛn adwen si su pa a afofor wɔ no do na yenya hɔnho abotar. Ma yensusu hɛn akyerɛbaa bi n’asɛm no ho nhwɛ. Adwendwen hyɛɛ no kun do araa ma ogyaa asafo nhyiamu kɔ. Hɛn akyerɛbaa no kãa dɛ: “Nna ɔyɛ dzen ma me papaapa. Nhyehyɛɛ a yɛyɛe maa hɛn daakye dɛ ebusua no sɛɛ koraa.” Naaso, ne nyinara mu no, hɛn akyerɛbaa yi a ɔyɛ ɔyer a ɔwɔ ɔdɔ no nyaa no kun ho abotar. Ɔdze noho too Jehovah do, na ɔammpa abaw da. Osũasuaa Jehovah na obuu n’enyi guu ɔhaw no do, na ɔdze n’adwen sii su pa a no kun wɔ no do. Hɛn akyerɛbaa no dze kaa ho dɛ, “Mo kun wɔ su pa ahorow pii, na nkakrankakra, ɔrobɔ mbɔdzen dɛ ɔronndwendwen pii.” Hɛn ebusuafo anaa hɔn a wɔwɔ asafo no mu a wɔrobɔ mbɔdzen dɛ wobedzi nsɛndzendzen ahorow bi do no, hwɛ hia a ohia dɛ yebenya hɔnho abotar!
19. Ebɛnadze na ɔsɛ dɛ yesi hɛn bo dɛ yɛbɛyɛ?
19 Aber a wɔbɔɔ asaase no, Jesus na abɔfo no dzii ehurusi. Naaso, hwɛ enyigye ara a wobenya ber a wobohu dɛ nyimpa a wodzi mũ na wɔdɔ Jehovah na wɔsom no no ahyɛ asaase do mã no. Hwɛ enyigye ara a nyimpa a wɔbɔkɔ sor nye Christ ekedzi tum no benya ber a wohu dɛ adasamba rinya hɔn edwuma do mfaso no. (Nyi. 4:4, 9-11; 5:9, 10) Afei so, hwɛ enyigye ara a yebenya ber a yaw etwa mu ma enyigye aba, ber a yarba, awerɛhow, na owu nnyi hɔ bio no. (Nyi. 21:4) Kesi dɛ dɛm aber no bɛba no, si wo bo dɛ ibosũasua w’Egya a ɔwɔ ɔdɔ, nyansa, na abotar no. Sɛ eyɛ dɛm a, w’enyi bɔkɔ do agye ɔmmfa ho ɔhaw biara a ibehyia no. (Jas. 1:2-4) Yɛda Jehovah ase papaapa dɛ ɔabɔ anohoba dɛ “owusoɛr bi bɛba”!​—Andw. 24:15.
Ebɛnadze ntsi na Jehovah bɔɔ nkwa?
Ebɛn kwan do na owusoɛr no da no edzi dɛ Jehovah wɔ ɔdɔ, nyansa nye abotar?
Ibesi dɛn akyerɛ dɛ w’enyi sɔ owusoɛr ho enyidado no?
^ nky. 5 Jehovah yɛ Egya a ɔwɔ ɔdɔ, nyansa, nye abotar. Mbrɛ osii bɔɔ adze nyina nye n’anohoba a ɔabɔ dɛ obenyan ewufo no ma yehu dɛ ɔwɔ dɛm su ahorow yi. Adzesua yi mu no, nsɛmbisa ahorow bi a yɛwɔ wɔ owusoɛr ho no, yebosusu ho. Afei so, adzesua yi bɛma yehu mbrɛ yebesi akyerɛ Jehovah no dɔ, ne nyansaa, nye n’abotar ho enyisɔ.
^ nky. 59 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU: Woenyan Americanyi bi a owui mfe pii no aba nkwa mu wɔ Christ ne Mfrenhyia Apem Tumdzi no ase. Onua bi a onyaa nkwa wɔ Har-Magedon no dze enyigye rekyerɛkyerɛ ɔbarimba a woenyan no efi owu mu no dza ɔwɔ dɛ ɔyɛ ama oeenya Christ no werdam no do mfaso.
^ nky. 61 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU: Onua bi rekã akyerɛ n’edwumawura dɛ dapɛn no mu nda no bi wɔ hɔ a orunntum nnyɛ overtime. Ɔrema n’edwumawura no ehu dɛ, ɔdze dɛm nda no yɛ Jehovah no som mu ndzɛmba. Naaso sɛ ohia no ber fofor a, ɔayɛ krado dɛ ɔbɛyɛ edwuma abor ber a ɔwɔ dɛ ɔpon no.
Fa mona Fa mona Owusoɛr No Ma Yehu Dɛ Jehovah Wɔ Ɔdɔ, Nyansa Nye Abotar
w20 August nkr. 14-19
Ana Erotweɔn “Kurow No A Ɔwɔ Fapem No”?
Fi Ahobrɛadze Mu Enye Wo Nyankopɔn Nnantsew
Woho Hia Wɔ Jehovah N’asafo No Mu!
Da Obu Edzi Kyerɛ Obiara Wɔ Jehovah N’asafo No Mu
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU August 2020
Fa mona Fa mona ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU August 2020
ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU August 2020